के फेलोशिप कार्यक्रमहरू पुरानो घावहरूको हेरचाहको लागि अवस्थित छ? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
मार्च 2, 2021 मार्च 1, 2021 गोमेरिस ब्लग, विशेष समाचार, स्वास्थ्य
धेरै फेलोशिप कार्यक्रमहरू अनुसन्धान प्रोजेक्टहरू वा चाहिने क्षेत्रमा योगदानको आधारमा अन्य विशेष लक्ष्यहरूको आवश्यक पर्दछ।
चिकित्सामा, फेलोशिपहरू चिकित्सकहरूको लागि मानिन्छ जसले मेडिकल स्कूल सकिसकेका छन् र उनीहरूको मेडिकल विशेषतामा रेसिडेन्सी पूरा गरेका छन्।
उप-विशेषज्ञ डाक्टरहरूको लागि एक फेलोशिप अनिवार्य छ जो औषधिको उच्च-विशेष क्षेत्रमा अभ्यास गर्दछन्।
पुरानो घाउको हेरचाहमा, फेलोशिप प्रोग्रामहरू र अन्य शैक्षिक अभ्यासहरूले चिकित्सकहरूलाई बढ्दो क्षेत्र भित्र निरन्तर विकसित हुने उपचार र जानकारीको साथ राख्न मद्दत गर्दछ। सामान्य घाउहरू जस्तो नभई, पुरानो घाउहरूले उपचारको पूर्वानुमान पाठ्यक्रम अनुसरण गर्दैन। त्यहाँ अन्तर्निहित अवस्थाहरूको एक मेजबान हुन सक्छ कि यसले पुरानो घाउहरूलाई अधिक सम्भावित बनाउँदछ, र कहिलेकाँही निरन्तर चलिरहन्छ, तिनीहरूलाई उपचार गर्न गाह्रो बनाउँदछ। यो पनि हो कि उपचारको चिकित्सकको प्रशिक्षण र विशेषज्ञताको आधारमा दीर्घकालीन घाउहरूको उपचार परिणामहरू फरक फरक हुन्छन्। चिकित्सकहरूको लागि यो प्रशिक्षण र विशेषज्ञता बढाउने एक तरिका भनेको फेलोशिप प्रोग्रामलाई विचार गर्नु हो।
एक फेलोशिप एक चिकित्सकका लागि उत्तमबाट सिक्ने अवसर हो किनभने ती अग्रणी फेलोशिपहरूलाई उनीहरूको क्षेत्रका सबै भन्दा कुशल र उच्च सम्मानित चिकित्सकको रूपमा लिइन्छ।
फेलोशिप भनेको के हो?
फेलोशिप भन्ने शब्द प्रयोगको क्रममा कुनै किसिमको छात्रवृत्ति, मौद्रिक पुरस्कार, वा शैक्षिक कार्यक्रम अभ्यासमा एक चिकित्सकको लागि अतिरिक्त शिक्षा समर्थन गर्न प्रयोग भएको हो। शिक्षाको लागतमा सब्सिडी दिन प्रायः यो पेशागतलाई दिइने कोषका रूपमा प्रस्ताव गरिन्छ। फेलोशिप्सले अनिवार्य रूपमा विद्यार्थीहरूलाई थप पछि लाग्न अनुमति दिन्छ - र अक्सर विशेषज्ञता, जस्तो कि पुरानो घाउ हेरचाह - प्रशिक्षण वा शिक्षाको मामलामा हुन्छ। यो अवस्था मा, सहभागिता समर्थन शिक्षा प्रदान एक मेडिकल विद्यार्थीको स्नातक डिग्री कार्यक्रम मा समावेश छ भन्दा पर।
किनभने तिनीहरू योग्यतामा आधारित छन्, विद्यार्थीहरू फेलोशिपको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् र उनीहरूको शैक्षिक अनुशासनमा सकारात्मक, दिगो स्थायी योगदान दिन सक्ने उनीहरूको क्षमताको आधारमा चयन गरिन्छ। नतिजाको रूपमा, धेरै फेलोशिप प्रोग्रामहरू अनुसन्धान परियोजनाहरू वा अन्य निर्दिष्ट लक्ष्यहरू चाहिन्छ चाहिएको क्षेत्रमा योगदानको आधारमा।
चिकित्सामा, फेलोशिपहरू चिकित्सकहरूको लागि मानिन्छ जसले मेडिकल स्कूल सकिसकेका छन् र उनीहरूको मेडिकल विशेषतामा रेसिडेन्सी पूरा गरेका छन्। एक फेलोशिप खोजी यी पेशेवरहरुलाई एक उप-विशेषता भित्र र थप स्कूल फिर्ता बिना नै थप चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। परिणाम यो छ कि तिनीहरू उदाहरणका लागि पेडियाट्रिक एनेस्थेसियोलजी जस्ता औषधीको एक विशिष्ट क्षेत्र भित्र मास्टर चिकित्सक बन्छन्।
जहाँसम्म यो बुझ्न आवश्यक छ कि एक चिकित्सक बन्नको लागि मेडिकल फेलोशिप आवश्यक छैन, धेरै चिकित्सकहरूले ओब्स्टेट्रिक वा गाइन्कोलोजी जस्ता सामान्य औषधीमा क्यारियर बनाउँछन्, र त्यस विशेषताको अभ्यास गर्न विशेष प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्दैन, एक फेलोशिप अनिवार्य छ उप-विशेषज्ञ डाक्टरहरू जो औषधिको उच्च-विशेष क्षेत्रमा अभ्यास गर्छन्। केवल सर्वश्रेष्ठ डाक्टरल उम्मेद्वारलाई प्रदान गरिएको, एक फेलोशिप एउटा ठूलो विशेषाधिकार मानिन्छ।
किन एउटा घायल हेरचाह फेलोशिप मामिलाहरु
पहिलो नजरमा, यस्तो देखिन्छ कि एक फेलोशिपले मेडिकल विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक वित्तीय साधनहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यद्यपि फेलोशिप खेल्ने अन्य थुप्रै कारणहरू छन्।
एक फेलोशिप एक चिकित्सकका लागि उत्तमबाट सिक्ने अवसर हो किनभने ती अग्रणी फेलोशिपहरूलाई उनीहरूको क्षेत्रका सबै भन्दा कुशल र उच्च सम्मानित चिकित्सकको रूपमा लिइन्छ। यसले अन्तर्दृष्टि, अनुभव र विशेषज्ञताको एक थप स्तर प्रदान गर्दछ, जसले केवल चिकित्सा पेशेवरको शिक्षा पूरकको रूपमा कार्य गर्दछ।
धेरै मेडिकल विद्यार्थीहरू पनि एक फेलोशिप खोज्छन् किनकि यसलाई सम्मान र सुअवसर मानिन्छ, र जुन क्षेत्र मा एक विश्वसनीय स्रोत बन्न पुग्छ। यस तरिकाले, एक फेलोशिपले विद्यार्थीलाई मेडिकलको क्षेत्रमा योगदान दिन अनुमति दिन्छ जुन अद्वितीय, पारस्परिक लाभदायक, र प्रायः आवश्यक पर्दछ।
फेलोशिप्स पनि एक चिकित्सकको व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढाउन, एक फेलोशिप अत्यधिक विशेषज्ञता सीप को उपस्थिति प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसबाहेक, रिजुमेमा फेलोशिपले कुनै उम्मेद्वारलाई शैक्षिक रोजगार बजारमा अलग सेट गर्दछ। हार्वर्ड मेडिकल स्कूलका क्लिनिकल रिसर्च फेलो डा। म्याकग्रीगोर क्रोलीले टिप्पणी गरे, “स्नातक फेलोशिप भनेको गुणस्तरको बाह्य प्रमाणीकरण हो।”
अन्तमा, एक फेलोशिप कार्यक्रम प्राय: पारस्परिक कौशल वृद्धि गर्दछ, कार्य प्रदर्शन सुधार गर्न कुञ्जी रणनीतिहरूको पहिचान गर्दछ, र उप-विशेषताको लागि अनुसन्धानमा सान्त्वना दिन्छ। यी सबै कारकहरू औषधीको विशेष सबफिल्ड भित्र चिकित्सा पेशेवरहरूलाई अझ राम्रोसँग गोलो बनाउन काम गर्दछन्।
के फेलोशिपहरू पुरानो घाउ हेरचाहमा अस्तित्वमा छन्?
पुरानो घाउको हेरविचार औषधीको विशेष क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन फेलोशिप प्रोग्रामको लागि निश्चित छ। घाउ हेरचाह फेलोशिपहरूको एक संख्या अवस्थित छ, कुन उम्मेदवार घाउ हेरचाह क्षेत्र भित्र अध्ययन गर्न खोजिरहेको छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ।
पुरानो घाउहरूको उपचार एक बढ्दो विशेषता हो, र यसको साथ, फेलोशिप अवसरहरू आशावादी रूपमा पनि बढ्ने छ।
अमेरिकन बोर्ड अफ घाव मेडिसिन एण्ड सर्जरी (एबीडब्ल्यूएमएस) ले घाँटी हेरचाह फेलोशिप प्रोग्राम निर्देशकहरूमा एक आयोग स्थापना गरेको छ जुन बोर्डलाई प्रस्तावमा सहयोग पुर्‍याउन डिजाइन गरिएको थियो। विशेष प्रशिक्षण एक अत्याधुनिक घाइते हेरचाह केन्द्र मा एक मजबूत hyperbaric ऑक्सीजन थेरापी कार्यक्रम संग। यसबाहेक, फेलोलाई अस्पताल भर विभिन्न विभागहरू, जस्तै संक्रामक रोग, त्वचाविज्ञान, र सामान्य, संवहनी, पोडियाट्रिक शल्यक्रियामा काम गर्ने अवसर दिइन्छ, जबकि benefits १००० एकेडेमिक स्काइपेन्ड, $ १००० सम्मेलन भत्ता, र एक हाइपरबेरिक थेरापी प्रमाणपत्र जस्ता लाभहरू प्राप्त गर्दै।
यो विशेष फेलोशिप प्रोग्रामले घुमावहरूको संयोजन प्रदान गर्दछ जुन संक्रामक रोग, त्वचाविज्ञान, र हाइपरबेरिक थेरापी प्रशिक्षण, साथ साथै घाउ हेरचाह पाठ्यपुस्तक प्रस्तुतीकरण, केस प्रस्तुतिकरणहरू, अनलाइन व्याख्यानहरू, र आवश्यक अनुसन्धान परियोजना आवश्यक छ।
पुरानो घाउहरूको उपचार एक बढ्दो विशेषता हो, र यसको साथ, फेलोशिप अवसरहरू आशावादी रूपमा पनि बढ्ने छ। करेन इम्मा गालाडाका लागि, शिकागोको इलिनोइस विश्वविद्यालयमा घाउ निको पार्ने र टिशू मर्मतका लागि चिकित्सक साथी फेलोशिप प्रोग्राम आँखा खोल्ने थियो।
फेलोशिप प्रोग्रामको बारेमा टुडेस घाउन्ड क्लिनिकमा लेख्दै गलाडा बताउँछिन्, “यो कुरा मलाई अहिले स्पष्ट भयो कि घाउको हेरचाह घावभन्दा बढी हो। बरु, यसले सम्पूर्ण व्यक्तिको उपचार समावेश गर्दछ। ” उनी अझै भन्छिन्, "घाउहरूको हेरचाह विशेषज्ञहरूले बिरामीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु आवश्यक छ, किनकि घाउको उपचारमा प्राय: धेरै भेटघाट र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ।"
जबकि देश भरका फेलोशिप कार्यक्रमहरूले हाम्रो स्वास्थ्यसेवा विशेषज्ञहरूको ज्ञान बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ, जबकि घाइते हेरचाह गर्ने बिरामीहरूले सुधारिएको हेरचाहको फाइदा लिन्छन्। पुराना घाउहरू भएकाहरूका लागि, वा जुन कहिल्यै पूर्ण रूपमा निको हुँदैन, त्यहाँ एक कुशल चिकित्सक द्वारा उपचार गर्नका लागि जीवनको गुणस्तरमा उल्लेखनीय भिन्नता छ। सुधारिएको बिरामी परिणामहरू कुनै पनि चिकित्सकको लक्ष्यको रूपमा सेट गरियो अभ्यास गर्नुहोस्, फेलोशिप कार्यक्रमहरूले कुनै पनि पेशेवर होनलाई उनीहरूको क्षेत्रको समस्याहरूमा मद्दत गर्न सक्दछ, मात्र नयाँ, नवीन समाधानहरूको साथ फर्कन जुन उपचार र आनन्दलाई बढावा दिन्छ।
सांप्रदायिक समाचार डाक्टर सहभागिता स्वास्थ्य चिकित्सकहरु घाउ हेरचाह
गेल मोरिस एक स्वतन्त्र लेखक हुन् जसले १० बर्ष भन्दा बढि स्वास्थ्य र स्वास्थ्यमा लेखिरहेकी छ। उनले २० बर्ष भन्दा बढी समय प्रमाणित नर्स र नर्स चिकित्सकको रूपमा बिताएकी उनको स्टेथोस्कोपलाई झुण्ड्याउनु अघि र कलम ०.० लाई लिनु अघि।